Piroofesar Kuwee: 'Gaaffiin darbaa dhufee as ga'e deebiyuu qaba' - BBC News Afaan Oromoo
Piroofesar Kuwee: 'Gaaffiin darbaa dhufee as ga'e deebiyuu qaba'
Pirofesar Maartaa Kuwee Kumsaa dubartii Oromoo waggaa dheeraa qabsoofi mirgoota namoomaa kan dubartootaa dabalatee falmaa turtedha.
Imala siyaasaa keessattis biyya keessaa hanga biyya alaatti bu'aa ba'ii hedduu keessa darbaniiru.
Qabsoo bilisummaa gaggeessaa turan keessatti waggoota dheeraafi hidhamuurra darbanii biyya hambaatti baqachuuf dirqamaniiru.
Pirofesar Maartaan hayyuu buleettiidhas. Saayinsii hawaasaafi aadaarratti ni qoratu, ogummaawwan hedduus ni qabu.
BBC Afaan Oromoo muuxannoo siyaasaa, mirga dubartootaaf falmuu, jireenya dhuunfaafi waan fuulduraas maal akka yaadan irratti turtii waliin taasiseera.
Pirofesar Maartaan maqaa biraa Kuwee jedhamuunis ni beekamu. Maqaa lamaan qaban akkamitti akka argatan yeroo ibsan: Maartaan abbaan koo [Qeesii] waan ta'eef maqaa kiristaanaa naaf baase jedhu.
'Sabboonummaan cunqursa tokko qofa irratti xiyyeefatee ofiisaatiin cunqursaa biraa fida'
'Wanti amma mul'atu nama gaddisiisa'
Kuwee ammoo akkookoo na guddistetu naaf baase jechuun, maqaan akkayaan baasteef kun maqaa Oromoodha jedhu.
Hiikna maqaa Kuwee yeroo dheeraaf osoo hin beekiin turanii namni maqaa sana jaallatu ofiin iyyaafachuun booda isaanittillee hiika inni qabu baruun akka isaanitti hime yaadatu.
Kanaaf, Kuwee jechuun hiikni isaa 'mootii kannisaa' jechuudha jedhu.
Piroofesar Kuween yeroo biyya alaa turanitti barumsaan alatti hojii gaazexeessumaatiin waggaa shaniif hojjedheera jedhu.
Rakkoo siyaasaaf waggoota kudhaniif erga hidhamanii booda ijoollee sadan qaban fudhatanii jireenya baqannaa akka filatan kan himan Kuween, yeroo biyya alaa ba'an sana ummanni Oromoo haccuuccaa hangana hin jedhamne keessa ture jedhu.
"Barattoonni Oromoo dur yeroo ani baqadhee deemus ni duuti. Amma yeroo deebiyus ijoolleen barattuu yunvarsiitiitti adda addaa keessaa du'aa jirti. Dhiigatu dhangala'aa jira. Baayyee na dhukkubsa sun. Baayyee imimmaantu ana qaba. Maaltu jijjiirame kan na jechisiisu kana," jechuun miira gaddaan dubbatu.
Jijjiirama baayyee jiru tuffachuu hin barbaadu kan jedhan Pirofesar Kuween, "Gaaffiin bara baraan gaafatamaa dhufetu jira. Gaaffiin darbaa, darbaa gangalataa dhufee nu bira ga'etu jira. Gaaffiin sun deebiyuu qaba," jedhan.
Siyaasa mootummaa caalaa siyaasa siyaasni ummata irratti hojjetamu, akka jecha isaaniitti siyaasni fardii, wanta xiyyeeffannoo addaatiin irratti hojjetamuu feesisudha.
Akka Pirofesar Kuween jedhanitti yoo siyaasa sammuu namaarratti sadarkaa gadiirraa jalqabanii hojjechuun sammuu namaa bilisa baasan, siyaasni mootummaa gidduu jirullee bilisa ta'a jedhan.
Siyaasni sammuu namaa bilisa baasuurratti hojjetamu milkaa'uun ammaa siyaasni dhaabbileen gidduutti hojjetamu akka bilisa bahutti yaadu Pirofesar Kuween.
Mirgoota dubartootaa mirkaneessuu keessatti baayyee hojjetamuu akka malus ni dubbatu. Dhimma dubartootaa irrattis kitaaba 'Dubartiin Alagaadha' jedhu barreesaniiru.
Ilaalchi dubartootaa irratti hawaasa keessa jiru ammallee qajeelchuu akka barbaachisu fakkeenya jiru kaasanii ibsu.
"Dubartiin alagaadhaa. Ar'allee aadaa Oromoo keessatti ijoolleen durbaa maatii keessatti dhalatte keessatti alagaadha, akka alagaatti ilaallamti. Maaliif, boor kennamti, bor kennamti mitii."
Dubartiin akka aadaatti erga eerumtees alagaan achii dhufte waan jedhaniif, alagaadha waan taateef, akkuma alagaattii ilaalamti jedhu Kuween.
"Hanga gaafa deessee karaa ilmooshee deesseetiin [lamummaa ishee] mirkaneeffattutti alagaadha. Ilmoo keessaayyu ammoo ilmoo isa dhiiraa ta'uu qaba. Maaliif dhiira jaallata oromoon? Karra dhaala jedhu mitii? Kanaaf, yoo dhiira deesse [lammii guutuudha] isheen. Amma gaafa deessuutti garuu alagaadha."
Pirofesar Kuween weedduu aadaa dubartii deesseef weeddifamu hafuun isaa sirrii miti jedhu.
"Baayyee nama gaddisiisa hafuun isaa. Maaliif yoo jettan, waan baayyee barbaachisaafi Oromummaa durii, kan Gadaa durii, kan Faajjii Walaabuu durii kan agarsiisudha sirbi sun.
Garuu hafaa jira, badaa jira. Nan gadda garuu baayyee. Osoon isa irra deebisee gara fuula duraa irratti hojjedhee natti tola. Gumaachikoo kana ta'a."
Piroofesar Kuwee Kumsaa
Waa'ee Obbo Leencoo Lataa kan namni hin beekne garuu beekuu qaba jettan jiraa gaaffii jedhuuf Pirofesar Kuween, waan miidiyaan haasa'aa ture caalaa waanan itti dabaluu qabu hin jiru jedhan.
Pirofesar Kuween ergaa ummataaf dha'aman ni qabu. "Osoo namni keenya walta'ee baayyeen gammada. Osoo namni quba gara nama biraa qofaatti qabuu dhiisee, ofittis quba qabee gaariidha," jedhu.
Hanga ar'aatti, 'ani maal gochuun narra jira' kan jedhu nama keenyarraa hin argu kan jedhan Pirofesar Kuween, hanqina isa inni tokko godhu qofaatti quba qabaa hafuurra osoo waan gochuufi gumaachuu dandeenyuuratti xiyyeeffannee jechuun dhaaman.
Prof. Kuwee Kumsaa: 'Sabboonummaan cunqursa tokko qofa irratti xiyyeefatee ofiisaatiin cunqursaa biraa fida'
Viidiyoo Piroofesar Kuwee Kumsaa: 'Gaaffiin barabaraan gaafatamaa ture ammayyuu hin deebine'